Global Aawaj | हारपछि पत्रकार सम्मेलनमा भड्किए कोहली हारपछि पत्रकार सम्मेलनमा भड्किए कोहली
हारपछि पत्रकार सम्मेलनमा भड्किए कोहली
८ कार्तिक २०७८ 9:24 am
एजेन्सी । टि२० विश्वकप क्रिकेटमा भारतले पाकिस्तानसँग लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। विश्वकपमा पाकिस्तानले भारतलाई पराजित गरेको यो पहिलो पटक हो। खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय कप्तान विराट कोहलीमाथि यस्तो प्रश्न उठ्यो कि उनी आफैँ छक्क परे। जब एक पत्रकारले टीम इंडियाको प्लेइङ ११ मा प्रश्न उठाए, तब विराटको फरक रवैया देखियो।
पत्रकार सम्मेलनमा एक पाकिस्तानी पत्रकारले विराट कोहलीलाई सोधे, ‘टीम इन्डिया छनोटमा प्रश्न उठिरहेको छ, के रोहित शर्माको स्थानमा इशान किशनलाई ल्याउन सकिन्थ्यो ? यो प्रश्नमा विराट कोहलीले पहिले भने कि यो एक धेरै साहसी प्रश्न हो।
कप्तान विराट कोहलीले उल्टो पत्रकारलाई सोधे, ‘तपाई के गर्नुहुन्छ, मैले मेरो उत्कृष्ट टिमसँग खेलेको छु । रोहित शर्मालाई टी २० टिमबाट हटाउने हो ? के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि उनले अन्तिम म्याचमा के गरे ? यदि तपाईलाई कुनै विवाद छ भने मलाई सिधै भन्नुहोस्, म त्यही जवाफ दिनेछु ।’
पाकिस्तानसँगको हारपछि कोहलीले भने, ‘हामीले हाम्रो योजनालाई सही ढंगले लागू गरेका छैनौं, यसैले पाकिस्तानले हामीलाई पूर्ण रुपमा हरायो। तीन विकेट चाँडै गुमाएपछि फर्कन निकै गाह्रो हुन्छ। हामीलाई थाहा थियो कि यो हार हुनेछ, त्यसैले त्यहाँ दबाब थियो।’
‘पाकिस्तानले हामी भन्दा राम्रो खेलेको छ, जसरी परिस्थिति बदलियो, हामीलाई १०-२० रन बढी चाहियो।’ कोहली भन्छन्, ‘हाम्रो लागि यो एक आतंक बटन मोड होइन, भर्खरै मात्र प्रतियोगिता शुरू भएको छ, यो समाप्त भएको छैन।’
विजयमा बाबर आजमले के भने ?
पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजमले आफ्ना खेलाडीहरुले हरेक रणनीति राम्ररी कार्यान्वयन गरेको बताए र जीतको श्रेय सम्पूर्ण टिमलाई जाने उनको भनाई छ । ‘हामीले हाम्रो रणनीति राम्ररी कार्यान्वयन गरेका छौं। जसरी शाहीन (शाह अफ्रिदी)को शुरू भयो, उसले हाम्रो मनोबल बढायो। स्पिनरहरूले मध्य ओभरहरूमा स्थिति राम्रोसँग ह्यान्डल गरे र हाम्रा बलरहरूले उनीहरूलाई डेथ ओभरहरूमा स्वतन्त्र रूपमा खेल्न दिएनन्।’ आजमले भने ।
‘शितको प्रभावले ब्याटमा बल राम्रोसँग आउँदै थियो । हामीले राम्रो तयारी गरेका थियौं र हाम्रा प्रत्येक खेलाडीले १०० प्रतिशत योगदान दिए। यो मात्र टूर्नामेंटको शुरुवात हो र हामी आगामी खेलहरुलाई पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।’
अफ्रिदीले भने – यो जस्तै बनेको म्याचलाई पकड
बायाँ हाते फास्ट बलर शाहिन शाह अफ्रिदी (३१ बलमा ३ विकेट) उत्कृष्ट बलिङका लागि म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले सुरुमा विकेट लिएर खेललाई जोगाउन सफल भएको बताए ।
‘यो पहिलो पटक हो। जब हामीले भारतलाई हरायौं र हामी गर्व गर्छौं। मलाई थाहा थियो यदि हामी चाँडै विकेट लिन्छौं, यो हाम्रो लागी राम्रो हुनेछ । मेरो प्रयास सकेसम्म धेरै स्विंग प्राप्त गर्न को लागी थियो। नयाँ बल खेल्न गाह्रो थियो, त्यसैले श्रेय बाबर र रिजवानलाई जान्छ।’ अफ्रिदीले भने ।